Galmudug Wasiirka Waxbarashada oo shahaadooyin guddoonsiiyay Arday + SAWIRRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Galmudug Wasiirka Waxbarashada oo shahaadooyin guddoonsiiyay Arday + SAWIRRO
Munaasabadan shahaado lagu siinayay 107 arday oo dhamaysatay dugsiga hoose dhexe una talaabaysa dugsiga sare ayaa lagu qabtay iskuulka Shira Jaaamac Axmed Juge waxaana ka qayb galay mas’uuliyiin ka socotay maamulka degmada, Wasiirka Wasaarada waxbarashada ee dawlad goboleedka gaalmudug, maamulka Jaamacadda Galgaduud, Ganacsato, waalidiin iyo qaybaha bulshada degmada.
Maamulaha iskuulka shira Jaamac Axmednaasir Jaamac ayaa ka warbixiyay iskuulka iyo marxaladihii uu soo maray, waxaana uu kula dar daarmay ardayda damaysatay dugsiga dhexe oo uu ku booriyay inay ka guul gaaraan waxbarashada.
Ardayda ayaa qaar kood ku hantay munaasabada abaalmarino kala duwan, waxaana ay ku soo bandhigeen madasha Ruwaayad ka turjumaysa faa’iidada waxarashada ay u leedahay Bulshada, taasoo si wayn u soo jiidatay waalidiinta ilmaha oo xaflada ku sugnaa iyo ka qayb galayaasha
Nuuro Xasan Cawl oo kamdi ah Guddiga waalidiinta Iskuulkaasi ayaa sheegtay in ay u tahay farxad ka qayb galka munaasabada ilmahooda.
Mahad Cumar Cilmi Gudoomiyaha degmada oo hadal kooan ka jeeediyay munaasabada iskuulka ayaa ku booriyay ardada inay laba jibaaraan dadaalkooda ku aadan waxbarashada.
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada ee dowlad goboleedka Galmudug Sheekh Ibraahin Guureeye oo lahadlayay ardayda qalin badalaneysa ayaa ku dhiira galiyay in Wasaaraddu ay la soconayso, isla markaana looga baahanyahay inay waxbarashadooda halkaas ka sii wataan.
Ugu dambay Wasiirka Waxbarashada iyo maamulka Jaamacada Galgaduud ayaa ardayda guddoon siiyay shahaadooyin iyo abaal marin Lacageed.